MSF waxey codsaneysaa in si deg deg ah loo sii daayo Shaqaalaheeda Afduuban Iyadoo aan la Isticmaalin awood waxeyna sii wadeysaa howlaha caafimaad ee ay siiso bulshada Soomaalida - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Ka dib markii la afduubay 2 ka mid ah shaqaalaha MSF oo ku sugnaa Dhadhaab, Kenya 13 ka bishan, hay’adda caalamiga ee MSF, waxaa aysan weli ogaanin cidii afduubka geysatay iyo ujeedkeeduba. MSF waxaa ay iska fogeyneysaa dhamaan iskahorimaadyada hubeysan iyo ku dhawaaqidda iskahorimaadyadaas oo lala xiriirinaayo afduubka. Afduubyadu aad ayey u adagyihiin waxeyna u
baahanyihiin in si taxadar leh loola dhaqmo, sidaa awadeed, MSF waxaa ay aad uga walwal qabtaa in ay khatar gasho xal u helida afduubka iyo amaanka lahaystayaasha haddii lala xiriiriy iskahorimaadyada iyo weerarda.
“MSF haatan waxaa ay wadahadal kula jirtaa dhamaan dadka ay arintan khuseyso in asxaabteena si deg deg ah loo soo sii daayo iyadoo aan wax awood ah la isticmaalin, maadaama ay taas tahay khatar,” ayuu yiri Jose Antonio Bastos oo ah madaxweynaha MSF dalka Spain. “Waxaan rabnaa in aan aad isakaga fogeyno howlgal militari ama fal walboo hub lagu isticmaalayo iyo ku dhawaqidda dagaalda oo la xiriiriyo arintan.”
MSF waxaa ay sii wadeysaa in ay caawimaad u fidiso dadka ay saameeyeen muusiibooyinka dhabiiciga ah ee ku nool Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti, inkastoo xaaldda amaanka aysan fiicneyn. Afduubka ka dib, MSF waxaa ay si ku meel gaar ah u joojisey howlihii ay ka wadey xerada Ifo 2 ee Dhaadhaab oo uu afduubka ka dhacay. Waxaa la joojiyey howlaha xarun yar caafimmad (health post) iyo
kiliinigyada aan joogtada aheen (mobile clinics) oo laga bixinaayey adeega asaasiga ah ee caafimaad, adeega loogu talagalay hooyooyinka uurka leh iyo dhalaanka, talaalada iyo qaabilida kiisaska xarumaha kale laga soo gudbiyo.
Xerada Dhagaxaley, MSF waxaa ay kawadaa dhamaan adeegyadeeda caafimaad gaar ahaan kuwa noolasha bukaanka lagu badbaadiyo iyadoo isticmaaleyso isbitaal leh 243 sariiradood oo ay haatan ku suganyihiin ku dhawaad 200 oo qof oo bukaan jiif ah gaar ahaan caruurta la il daran nafaqa darada. Hasayeeshee waxaa si ku meel gaar ah loo joojiyey adeegyo ka socon jirey xarumo kaloo 5 ah oo
yar yar laakiin shaqaalaha waxey diyaar u yihiin in ay dib uga laabtaan howshoodu haddii xaaldda amaanka ay u saamaxdo. Qeyb ka mid ah mashruuca daaweynta nafaqa darada oo ay ka diiwaan gashanaayeen 15,000 oo qof, ayaa sidoo kale la joojiyey.
MSF waxaa ay si aan kala go’a lahayn uga howlgali jirtey Soomaaliya tan iyo sanadkii 1991 gii waxaana haatan ay dalka ku leedahay 13 mashruuc oo ay ka mid yihiin kuwo loogu talagalay mashruuca deg degga ah ee haatan ka jira dalka, talaal iyo ka hortagga nafaqa darada. Si ay ku sii wado mashruucyadaas, MSF waxaa ay wadahadal lagashaa maamulada maxaliga ah. Xeryaha Dhaadhaab ee Kenya, MSF waxaa
ay howlaheeda dib u bilowdey sanadkii 2009 ka, waxaana ay sidoo kale ay gargaar u fidisaa qaxootiga Soomaalida eek u sugan xeryaha Dolow Ado ee Ethiopia.
“Waxaan aan aad uga walwalsanahay xaaldda saaxiibadeen (afduuban). MSF waxaa ay ku howlantahay in ay adeeg caafimaad oo bilaash ah ay siiso bulshada Soomaalida eek u dhaqan dalka Soomaaliya iyo dibadiisaba,” ayuu yiri Bastos, “laakiin heerka bixinta adeegaas waxaa aad u saameynaaya weeraradan. Waa argagax weyn”.
Tags: MSF, MSF Staff abducted, refugee camp, Refugees